Isbeddellada MarTech ee Wadda Isbadalka Dijital ah | Martech Zone
Qaar badan oo ku takhasusay suuqgeyntu way ogyihiin: tobankii sano ee la soo dhaafay, tikniyoolajiyadaha suuq geynta (Martech) ayaa ku qarxay koritaanka. Habkan koritaanku ma hoos u dhacayo. Xaqiiqdii, daraasaddii ugu dambeysay ee 2020 waxay muujineysaa inay dhammaadeen 8000 oo qalab tignoolajiyada suuq geynta suuqa. Badi suuqleydu waxay isticmaalaan in ka badan shan qalab maalin la siiyay, iyo in ka badan 20 guud ahaan fulinta xeeladahooda suuqgeyneed.
Goobaha Martech waxay ka caawiyaan ganacsigaaga labadaba inay dib u soo ceshadaan maalgashiga waxayna kaa caawinayaan inaad hesho koror la taaban karo oo iibka ah adoo dardargeliya safarka iibka, kobcinta wacyiga iyo helitaanka, iyo kordhinta qiimaha guud ee macaamil kasta.
60% shirkadaha waxay rabaan inay kordhiyaan kharashaadkooda MarTech sanadka 2022 si ay u laba jibaaraan ganacsigooda ROI.
Soo dhawow, Isbeddellada Sare ee Martech ee 2021
77% suuqgeynayaashu waxay qabaan MarTech waa darawal si loo xaqiijiyo kobaca ROI, iyo go'aanka ugu muhiimsan ee shirkad kastaa ay tahay inay doorato qalabka MarTech ee ku habboon ganacsigooda.
Soo dhawow, Martech oo ah Istaraatijiyad Istiraatiiji ah
Waxaan aqoonsannay 5 tignoolajiyada suuq-geynta muhiimka ah ee isbeddellada la xiriira. Waa maxay isbeddelladan, sideese maalgelintoodu u wanaajin kartaa booskaaga suuqa xaaladda dhaqaale ee faafa ee COVID-19 ee aan xasilloonayn maanta?
Isbeddellada 1: Sirdoonka Artificial iyo Barashada Mashiinnada
Farsamadu ma taagna. Sirdoonka macmalka ah (AI) ayaa ugu horreeya dhammaan isbeddellada tignoolajiyada suuq-geynta. Haddi aad bartilmaameedsanayso ganacsiyada ama macaamiisha, suuq-geynayaashu waxay raadinayaan badeecooyin cusub oo ay ku raaxaystaan ​​horumarka tignoolajiyada.
72% khabiirada suuqgeynta ayaa rumeysan in adeegsiga AI uu hagaajinayo geedi socodkooda ganacsi. Iyo, laga bilaabo 2021, shirkaduhu way kharash gareeyeen in ka badan $ $ 55 on sirdoonka macmal ah xal suuq-geyntooda. Tiradan ayaa la filayaa inay kordho 2 bilyan.
Maanta AI iyo ML waxay leeyihiin laba faa'iidooyin oo waaweyn dhammaan mashaariicda internetka:
Awoodda lagu sameeyo falanqaynta caqliga leh, taas oo oggolaan doonta hirgelinta xalal wax ku ool ah
Awoodda lagu hubinayo waxqabadka ugu sarreeya ee suurtogalka ah
Dhammaan shirkadaha waaweyn ee warbaahinta, oo ay ku jiraan Instagram, YouTube, iyo Netflix, waxay hirgelinayaan AI iyo Barashada Mashiinka (ML) algorithms si loo aqoonsado loona soo bandhigo waxyaabaha ay u badan tahay inay soo jiitaan dareenka isticmaalaha.
Labadii sano ee la soo dhaafay, isbeddelka ML ee sida chatbots wuxuu noqday hoggaamiye dhammaystiran oo ka mid ah noocyada Maraykanka.
Meesha kale ee kobaca la dadajiyay ayaa ah chatbots-ka AI ay wado. Chatbot-ku waa aalad dhijitaal ah oo si weyn u ballaarin karta xiriiradaada. Waxa kale oo ay ururiyaan oo ay falanqeeyaan xogta qiimaha leh ee macaamiisha, waydiiyaan su'aalo kala duwan oo khuseeya booqdayaasha, waxay bixiyaan badeecooyin cusub iyo xayeysiisyo. 2021, in ka badan 69% macaamiisha Maraykanka la falgalay sumadaha via chatbots. Chatbots labaduba waxay soo jiitaan macaamiisha waxayna dardargeliyaan ka qaybgalka - iyadoo horumar laga sameeyay wax qabadka iibsiga oo u dhexeeya + 25% qulqulka ilaa labanlaabka natiijooyinka.
Nasiib darro, ganacsiyo badan oo yaryar iyo kuwa dhexdhexaad ah - iyagoo doonaya inay lacag badbaadiyaan - ma aysan qaadan chatbots-ka… Si ay chatbots-ku u noqdaan kuwo wax ku ool ah, maaha inay noqdaan kuwo faragelin kara oo dhibsada. Mararka qaarkood shirkadaha soo geliyay khatarta istaraatijiyad chatbot-ka xad dhaafka ah ayaa ka cadhaysiisay macaamiishooda oo ku riixeen tartamayaasha. Istaraatiijiyada chatbot-kaaga waxay u baahan tahay in si taxadar leh loo hawlgeliyo lana kormeero.
Isbeddellada 2: Falanqaynta Xogta
Falanqaynta xogtu waa isbeddelka tignoolajiyada suuq-geynta labaad ee ganacsiyadu si weyn u maalgashadaan. Cilmi-baadhis sax ah iyo cabbiriddu waa muhiim si loo helo macluumaadka suuq-geyneed ee muhiimka ah nidaamyada software-ka. Maanta ganacsiyadu waxay adeegsadaan aaladaha softiweerka sida Guddiga, Dhalashada, Iyo ClearStory in:
Horumarinta Dashboards Interactive
Dhis Warbixin Saameyn leh
Falanqayntan horumarsan waxay gacan ka geysataa adeegsiga istiraatijiyadda shirkadda si wax ku ool ah oo ay u wado go'aannada ganacsi ee ka wanaagsan si dhakhso leh oo habboon.
Falanqaynta xogta ayaa aad loogu baahan yahay adduunka casriga ah. Waxay u oggolaaneysaa shirkadaha inay helaan xog gorfayn la'aan dadaal badan. Marka la rakibo goob gaar ah, shirkaduhu waxay horeyba ugu lug lahaayeen habka ururinta xogta si kor loogu qaado tayada. Si kastaba ha ahaatee, ha iloobin qodobka bani'aadamka ee la falgala falanqaynta xogta. Xirfadlayaasha goobtooda waa inay isticmaalaan xogta laga helay habka.
Isbeddellada 3: Sirdoonka Ganacsiga
Sirdoonka ganacsiga (BI) waa nidaamka codsiyada iyo tignoolajiyada suuqgeynta kaas oo kuu ogolaanaya inaad ururiso xogta falanqaynta hababka ganacsiga iyo dardargelinta codsiga xalalka wax soo saarka.
Ku dhawaad ​​kala bar dhammaan meheradaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ahba waxay u adeegsadaan sirdoonka ganacsiga fulinta suuqgeynta iyo horumarinta istiraatiijiyaddooda.
Dhaqangelinta ganacsiga BI ayaa kor u kacday 27% sanadka 2021. Kor u kacani waa uu kori doonaa tan iyo in ka badan 46% shirkaduhu waxay sheegeen inay u arkaan nidaamyada BI fursad ganacsi oo awood leh. Sannadka 2021, milkiilayaasha meheradaha oo leh 10 illaa 200 oo shaqaale ah ayaa sheegay in diiradooda ka dib masiibada COVID-19 ay u jeesatay BI si ay u noolaato.
Fududeynta adeegsigu waxay sharraxaysaa caannimada sirta ganacsiga ee dhammaan ganacsiyada. Looma baahna xirfado barnaamij si ay ula qabsadaan hawshan. Software-ka BI ee 2021 waxa ku jira hawlo muhiim ah, sida:
Jiid oo ka tag isdhexgalka oo aan u baahnayn horumar.
Sirdoonka la dhisay iyo falanqaynta saadaalinta
Habaynta luqadda dabiiciga ah ee degdega ah (NLP)
Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya falanqaynta ganacsigu waa bixinta taageerada samaynta go'aannada ganacsi ee gaarka ah iyo caawinta shirkadaha horumarinta. Waxaa intaa dheer, falanqaynta xogta waxay kuu ogolaaneysaa inaad saadaaliso oo aad xogta u beddesho baahiyaha ganacsiga.
Isbeddellada 4: Xogta Weyn
Xog weyn waa hab aad u ballaadhan oo loo ururiyo macluumaadka marka loo eego falanqaynta xogta. Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya xogta weyn iyo falanqaynta xogta waa ku shaqeynta xog adag oo software-dhaqameedku aanu qaban karin.
Faa'iidada ugu weyn ee xogta weyn waa in la tilmaamo dhibcaha xanuunka shirkadaha, kuwaas oo ay tahay inay ku bixiyaan dadaal badan ama ay lacag badan ku bixiyaan si ay u noqdaan kuwo guuleysta mustaqbalka. 81% shirkadaha isticmaala xogta weyn waxay muujiyeen isbeddel weyn oo ku yimid jihada wanaagsan.
Xog -weyne wuxuu saameeyaa shirkadaha muhiimka ah ee suuq -geynta sida:
Abuuritaanka faham wanaagsan oo ku saabsan hab-dhaqanka macaamiisha ee suuqa
Horumarinta habab wax ku ool ah oo lagu hagaajin karo xeeladaha warshadaha
Aqoonsiga aaladaha waxtarka leh ee kordhiya wax soo saarka
Isku-dubbaridka sumcadda internetka iyadoo la adeegsanayo qalabka maamulka
Si kastaba ha ahaatee, falanqaynta xogta weyn waa geedi socod adag oo u baahan in loo diyaar garoobo. Tusaale ahaan, waxaa habboon in la kala doorto laba nooc oo xog weyn ah oo suuqa ku jirta:
Software-ku-salaysan kombuyuutar kaas oo lagu hirgelin doono agabka sida Hadoop, Atlas.ti, HPCC, Plotly
Software-ka ku salaysan Cloud ee xisaabinta hufnaanta suuqgeynta iyo falanqaynta daruuraha sida Skytree, Xplenty, Azure HDInsight
Muhiim ma aha in dib loo dhigo habka hirgelinta. Hogaamiyayaasha adduunku waxay muddo dheer fahmeen sida taariikhda weyni ay si wax ku ool ah u saamayso ganacsiga. Tusaalaha cajiibka ah ayaa ah qulqulka weyn ee Netflix, kaas oo, iyadoo la kaashanayo xogta weyn ee saadaalinta hufnaanta iyo hagaajinta tayada, waxay badbaadisaa in ka badan $ 1 bilyan sanadkii.
Isbeddellada 5: Habka Moobilka-Ugu Horeeya
Ma malayn karno nolosheena la'aanteed moobillada. Milkiilayaasha meheraddu had iyo jeer si taxaddar leh ugama aysan hadlin dadka isticmaala taleefannada casriga ah. Sannadkii 2015, Google ayaa saadaalisay isbeddellada casriga ah, oo bilaabay algorithms-kii ugu horreeyay ee mobilada si ay u taageeraan noocyada mobilada ee bogagga internetka. Meheradaha aan lahayn goob mobile-ku diyaarsan ayaa lumiyay muuqaalka natiijooyinka raadinta moobaylka.
Bishii Maarj 2021, heerkii ugu dambeeyay ee tusmaynta Google ee aaladaha mobilada ayaa si buuxda u dhaqan galay. Hadda waa waqtigii ganacsatadu soo bandhigi lahaayeen badeecadahooda internetka iyo mareegaha si loogu isticmaalo moobilka.
Ku saabsan 60% macaamiisha ha ku soo noqon boggaga leh nooca moobilka ee aan haboonayn. Ganacsiyadu waxay u baahan yihiin inay sameeyaan wax kasta oo suurtagal ah si ay u wanaajiyaan oo u wanaajiyaan noocyada alaabadooda dhinac kasta. Iyo 60% dadka isticmaala taleefannada casriga ah ayaa si toos ah ula xiriiray ganacsiga iyaga oo isticmaalaya natiijooyinka raadinta.
Isbeddellada mobilada ee ugu horreeya waxay dhexgalaan ML, AL, iyo NLP isticmaalka raadinta codka. Dadku waxay si degdeg ah u qaadanayaan raadinta codadka si ay u helaan badeecad ama adeeg gaar ah sababtoo ah saxnimadeeda sii kordheysa iyo sahlanaanta isticmaalka.
In ka badan 27% dadka adduunka oo dhan waxay cod ku raadiyaan aaladahooda. Gartner wuxuu tusay in 30% dhammaan kalfadhiyada internetka ay ku jiraan raadinta codka dhammaadka 2020. Macmiil celcelis ahaan wuxuu doorbidaa raadinta cod si loo qoro. Markaa, hirgelinta cod raadinta shabakadaada iyo noocyada mobilada waxay noqon doontaa fikrad fiican 2021 iyo wixii ka dambeeya.
Scalers, Dhammaan waxaad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Tiknoolajiyadda Suuqgeynta
Tignoolajiyada suuqgeyntu si degdeg ah ayay u socotaa. Si ganacsiyada kala duwan ay u kobcaan, falanqaynta tayada sare leh iyo agabka ayaa loo baahan yahay si loo soo jiito isticmaalayaasha dhinacooda. Iyada oo fiiro gaar ah siineysa isbeddelladaan muhiimka ah ee suuq -geynta, shirkaduhu waxay awoodi doonaan inay doortaan waxa iyaga ku habboon. Shirkaduhu waa inay mudnaanta siiyaan isbeddelladan marka ay horumarinayaan:
Miisaaniyadda tignoolajiyada suuq-geynta
Qorshaynta suuqgeyneed ee istiraatiijiga ah
Qalabka cilmi baarista iyo falanqaynta
Hibada iyo horumarinta shaqaalaha
Shirkaduhu waxay dardargelin doonaan isbeddelka iibkooda dhijitaalka ah iyo suuqgeyntooda iyagoo fulinaya tignoolajiyada suuqgeynta ee la xaqiijiyay.
Tags: aiAnalyticssirdoonka macmalxog weyndhalashoguddigasirdoonka ganacsigasheekooyinkacadeyndashboardsfalanqaynta xogtaIsbadal digital ahgooglemiisaaniyadda suuqgeyntakartida suuq geyntatikniyoolajiyadda suuqgeyntaisbeddellada tignoolajiyada suuq-geyntahalgankaisbeddellada martechraadinta moobiilkamobilada-marka horefarsamaynta luqadda dabiiciga ahnlpraadinta codka